Tapaka Ny Hevitr’ireo Firenena Karibeàna Hilaza Izay Ao am-pony momba An’i Venezoelà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Febroary 2019 11:49 GMT
Diaben'ireo Venezoeliàna mpanohitra, Martsa 2017. Sary: sehatra ho an'ny daholobe tao amin'ny Wikimedia Commons
Ny 7 Febroary, hisy iraka manokana avy amin'ny Vondrom-piarahamonina Karaibiàna (CARICOM), ho tonga hanatrika ny fihaonana ao Montevideo, Orogoay hiresahana ny toedraharaha ao Venezoelà. Niarahan'i Orogoay sy Meksika nikarakara, ilay fihaonana dia ho atrehanà “firenena sy fikambanana maherin'ny 10,” ary hivondronan'ireo rehetra tsy nomba ny andaniny sy ny ankilany tamin'ity raharaha Venezoelà ity — andiany iray izay nataon'ireo mpilaza vaovao iraisampirenena mahazatra ho anjorom-bala tany anatin'ireo fandrakofana ny toedraharaha tao Venezoelà izay nafantoka fotsiny tamin'ireo izay nankatò an'i Juan Guaidó ho toy ny filoha mpisolo toerana, miampy ireo azo isaina amin'ny rantsan-tànana—Rosia, Shina, Tiorkia, Iràna—izay manohana tsy misy fepetra ny fitakiana ny fitondràna ny firenena nataon'i Nicolás Maduro .
Miaraka amin'ny fanatrehan'ireo mpikambana avy amin'ny Fiombonambe Eoropeàna sy ireo fanjakana hafa ao Amerika Latina, tsy maintsy hiady mafy ilay CARICOM kely mba hihainoana ny teniny ao Montevideo. Saingy izay miseho ao Venezoelà dia tena manana lanja mavesatra amin'ny resaka jeopolitika ho an'ny faritra Karaiba, ary efa naneho fileferana betsaka ny CARICOM faramparany teo, voalohany indrindra tamin'ny nisafidianany hihataka amin'ny fomba fijery iraisampirenea sy nandraisany fomba fijery tsy mitsabatsabaka momba ny raharaha Venezoelà. Avy eo tonga tamin'ny 31 Janoary ny fanamelohana imasombahoaka an'i Luis Almagro, sekretera jeneralin'ireo firenena Amerikàna, nitakiana azy “hanazava imasombahoaka fa tsy miteny amin'ny anaran'ireo firenena rehetra mpikambana [izy]” fony izy naneho fankatoavana an'i Guaidó ho toy ny filoha vonjimaika ao Venezoelà.
Vakio: Tsy mitovy fijery izy ireo: maka ankolafy momba ny raharaha Venezoelà ireo firenena ao Karaiba [Ang]
Ny 28 Janoary, nalefan'ny CARICOM ihany koa ny iraka iray hanatrika ny fihaonana iray tao New York niarahana tamin'ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana, Antonio Guterres. Ny 4 Febroary, Guterres nilaza tamin'ireo mpanangona vaovao fa tsy hitanila hanohana na iza na iza amin'ity famahàna ny olana Venezoeliàna ity ny Firenena Mikambana.
Fiantraikany ao an-toerana
Ry Trinidad sy Tobago, ireo nosy ao anatin'ny CARICOM tena akaiky an'i Venezoelà koa dia nidofotra taminà fifanoherana anaty momba ny fomba fijery ny raharaha Venezoeilàna. Tamin'ny 2 Febroary, nikarakara diabe tao amin'ny renivohitr'i Trinidad ireo mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Venezoeliàna eny anivon'ny vahoakan'ity firenena ity, mba haneho ny fanohanany an'i Guaidó. Tao anatin'ilay diabe, nozarain-dry zareo ny dika mitovy amin'ilay taratasy misokatra nalefa ho an'ny praiminisitra Keith Rowley nangatahana azy mba hanao toy izany koa. Araka ny vinavina, eo amin'ny Venezoeliàna 60.000 eo ry zareo no monina ao Trinidad.
Ny mpanohitra ao amin'ny firenena koa dia naneho ny fanohanany an'i Guaidó. Nandritra ny fotoam-pivoriana iray tao amin'ny parlemanta, nampitandrina ilay filoha mpitarika ny mpanohitra no sady praiminisitra teo aloha, Kamla Persad-Bissessar, hoe ireo hetsiky ny governemanta dia “mety hidika tsara amintsika hoe fanaovana veloma ny fifanarahana Dragona,” ilazàna ilay fifanarahana angovo nifanaovan'i Trinidad sy Tobago tamin'ny fitantanan'i Maduro tamin'ny Aogositra 2018 mba hahafahan'ny nosy mahazo entona avy any amin'ny tanin'ny Dragona. Toy ny nomarihan'ny olona iray mpahay toekarena, niaraka tamin'ny fanakatonana ny orinasa fanadiovana solika Petrotrin tamin'ny taona lasa, tafiditra anatin'ny toeran'ny tsy fananana antoka amin'ny resaka angovo i Trinidad sy Tobago, izay mety vao mainka hihamafy noho ny fametrahan'i Etazonia sazy amin'ny PDVSA, ilay orinasan-tsolika ao Venezoelà..
Vakio: Misalasala hankato na tsia ny maha-filohan'i Venezoelà an'i Guaidó ireo firenena ao Karaiba
Nisy fiantraikany hatrany amin'ny sehatry ny angovo any Jamaika ilay olana ao Venezoelà. Tany am-piandohan'ny Janoary, fotoana fohy talohan'ny nifidianan'i Jamaika hanohana ny fanapahankevitry ny OAS hanambara hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny fepotoana faharoa hitondran'i Maduro ho toy ny filoha, nambaran'ny governemanta ny eritreriny hamoaka lalàna iray hisintonana indray ny 49% amin'ny petrabola ao anatin'ilay orinasan-tsoliky ny fanjakàna, Petrojam. Ny mpanohitra sy ireo hafa dia nahamarika ny fifandrifiana nisy tamin'ireo tranga roa ireo, saingy nolavin'ny governemanta ny fisian'izay fifandraisana izay. Na izany aza, nitohy ihany ny dian'i Jamaika, hanao sonia ilay fanambaran'ny CARICOM tamin'ny 24 Janoary manamafy ny fijoroany tsy hitsabatsabaka amin'ilay raharahan'i Venezoelà.